Ugcino lwexesha elizayo lweBitcoin
Udidi: I-Bitcoin futures
Uphononongo lwePlatform yeNimbus: Ikhuselekile kwaye iTrustwothy
Ukuhlaziywa: 23 October 2021
Kule mihla kunye neminyaka, izinto ezintsha zetekhnoloji zibonakala zisenzeka mihla le, kwaye abantu abaninzi bahlala besala bezibuza ukuba ingakanani na eyinyani, kwaye ingakanani na intsomi. I-Nimbus, enikezela ngeenjongo zokufezekisa ibhanki esemthethweni esebenza kwimarike ye-DeFi, yenye yezo nkampani abanye bakholelwa ukuba zilungile kakhulu ukuba zibe yinyaniso.
Kodwa inyaniso kukuba, nangona okanye mhlawumbi ngenxa yokungazithembi kwabantu ezi ngcamango, i-Nimbus ibonakalise ekuhleni kwiinjongo zayo kunye nokusebenza kwayo. Ukusebenza kunye nabasebenzisi engqondweni, uNimbus unenkqubo esekelwe kukuvota njengenxalenye yobomi bayo. Abasebenzisi banamandla, kwaye izicelo zabasebenzisi kunye neenkxalabo zihlala zilungiswa ngokukhawuleza kwaye ngokungafihlisiyo yinkampani.
Ukuhambisa ukucaca kunye nezisombululo ezibanzi kwimarike yeDeFi, iqonga leNimbus lizilungiselela ngokwalo ukuze lihlangabezane nazo naziphi na iimfuno zomsebenzisi ezinokubakho. Ugxininiso kwizinto ezintsha, iqonga elisebenza kwi-blockchain linikezela ngenkonzo yemali yonke ngelixa liqhubeka nokudala amava angcono omsebenzisi kubasebenzisi abaza kubakho kunye nabakhoyo ngoku. Kuyaqondakala ukuba umntu unokuba nomcimbi okhethekileyo kunye nemarike ye-DeFi, kwaye ngokusemandleni akhe, i-Nimbus ifuna ukubonelela naluphi na uncedo olunokuba nalo kwabo bangena emarikeni okokuqala.
I-Nimbus yasungulwa kwingcamango yokwenza umsebenzisi ingqwalasela ephambili, kwaye ukuza kuthi ga ngoku uye wasebenza ukwenza ibhanki ye-DeFi ikhuseleke kwaye isebenze kakuhle, ivumela iindlela ezininzi kubasebenzisi ukuba bafumane imali ngokwemiqathango yabo. I-Nimbus idale iqonga elinikezela ngeendlela ezilishumi elinesithandathu zabasebenzisi ukuphonononga impumelelo esekwe kwi-crypto. Ngalo lonke eli xesha unikeza ingcaciso ecacileyo yeendlela ezikhankanyiweyo kunye nokudala ngokusebenzayo izikhokelo kunye noncedo lwabathengi xa kuyimfuneko.
Kunzima ukujonga iindaba kwezi ntsuku kwaye ungaboni ukophulwa kwedatha enkulu kwinkampani enkulu okwenzekileyo. Ngokungafaniyo neenkampani ezinkulu, iNimbus ifuna ukunika iinkonzo eziqhelekileyo nezifikelelekayo kubasebenzisi bayo. Ukuchukumisa umntu ovela kwinkampani ngelixa ibonelela ngeemveliso ezinje ngomatshini wokutshintsha, utshintshiselwano olunamagunya, utshintshiselwano lweP2P, indlela ebalulekileyo yokuvota, kunye nezinye ezininzi.
Ukuthembana ngundoqo xa kufikwa ekusebenzeni kwindawo enjalo, ngakumbi xa kubonakala ngathi kukho ukunqongophala nokungafihli nto kwiinkampani ezininzi zobugcisa. I-Nimbus ayisebenzi nje ukubonisa ukuba inokuthenjwa, kodwa kunye nokufumana kunye nokugcina ukuthembela komsebenzisi kunye nenkqubo yayo. Isebenza ngenkuthalo ekususeni iibugs kwaye inikezela ngesisa kwabo bazifumanayo kunye nobunye ubuthathaka kwiinkqubo zayo.
Ukhuseleko, intembeko, ukusebenza kakuhle, kunye nokuchukumisa umntu; ezi ziinqobo zokwenyani zikaNimbus. Njengoko imakethi ye-DeFi iqhubeka nokuhambela phambili kunye ne-innovation ekufutshane ngasemva, i-Nimbus iya kuqhubeka inikezela ngeenkonzo ezifanelwe ngabasebenzisi bayo, ngokuphandle kunye neengxoxo ezivulekileyo zihlala zihamba phambili kwimisebenzi yayo.
tags ibhanki enamagunya, DefFi, I-Nimbus, Iqonga leNimbus
I-Eightcap isungula i-250 + ye-Crypto Derivatives, Ukuzibeka njengeyona ndawo inkulu ye-Cryptocurrency enikezela abaThengisi
Ukuhlaziywa: 7 Septemba 2021
U-Eightcap, umrhwebi ophumelele amabhaso kwi-CFD, ubhengeze ukusungulwa okungaphezulu kwe-250 ye-Cryptocurrency derivatives, evumela abathengi bayo ukuba baphambukise ipotifoliyo yabo ye-crypto ngokusebenzisa iqonga le-MT4 kunye ne-MT5. Olu phehlelelo lutsha lubeka umthengisi njengekhaya elitsha lezinto eziphuma kwi-crypto kunye nelona likhulu kwicandelo le-CFD.
Umrhwebi uyaziqonda iinkxalabo ezikhoyo zokuthengisa abathengi abajongene nokutshintshiselana nge-crypto okunciphisa umda wokurhoxa ngenxa yemicimbi yolawulo kunye namanyathelo angena nesisombululo. Abathengi abayi kukwazi kuphela ukuthenga okanye ukuthengisa uluhlu olubanzi lwee-Cryptocurrency CFDs, kubandakanya ii-crypto-crosses kunye nee-indices ze-crypto, kodwa abathengi bayo baya kuba neenketho ezininzi zenkxaso-mali kwaye babenakho ukukhupha ngokukhawuleza.
"Umbono wethu e-Eightcap kukubonelela ngendawo entsha yabarhwebi abaphuma kwi-Crypto ngokunikezela ngomnikelo ongenakuthelekiswa nanto obandakanya eyona thala leencwadi likhulu le-crypto elidityaniswe nokusasazeka kwe-Ultra-low kunye nokukhetha ngokukhawuleza," utshilo uJoel Murphy, CEO, Eightcap. Imicimbi yolawulo yokutshintshiselana nge-crypto enje ngeBinance ijongiwe kuthetha ukuba abathengisi bashiyeka benamaxhala angeyomfuneko malunga neengxowa-mali zabo kwaye ukuba banakho ukuzikhupha. Nathi, abarhwebi abaphuma kwiCrypto banamava angenamthungo ukusukela ngoku bavula iakhawunti ukuya kuthi ga xa befuna ukukhupha imali yabo. ”
UMarcus Fetherston, uMlawuli wezeMisebenzi e-Eightcap wongezwa, “Umnikelo we-Eightcap ujolise kuphela ekudaleni amathuba okurhweba asuselwe kubathengisi be-Cryptocurrency, enika ukhuseleko ngakumbi kunamaqonga emveli otshintshiselwano nonxweme. Kuyasivuyisa ukunika isisombululo esihlangabezana neemfuno zabarhwebi abavela kwimveliso ye-crypto ukuze bafumane elona thuba lihle lokurhweba. ”
Abarhwebi abaphuma kwiCrypto okwangoku kunye notshintshiselwano kunye nabarhwebi banokufikelela kuluhlu olulinganiselweyo lwezinto eziphuma kwiCrypto ezisasazeke ngokubanzi. Xa utshintshela kwi-Eightcap, abathengisi abaphuma kwi-Crypto baya kuba nakho ukukhetha kweyona mali inkulu ye-Cryptocurrency, amava asasazekayo, kunye nokufaka kunye nokukhupha ngokulula, kunye nomrhwebi olawulwayo.
Ukufumana ngakumbi malunga nomnikelo omtsha we-Eightcap, cofa Apha.
I-Eightcap yinkampani yezorhwebo ekwi-Intanethi esekwe eMelbourne, e-Australia. I-Eightcap ilawulwa kwimimandla emininzi. Umrhwebi okhula ngokukhawuleza ubonelela nge-Intanethi kunye nezisombululo zorhwebo kwi-intanethi ngokusebenzisa amabhaso okurhweba nge-MT4 kunye neqonga lokurhweba le-MT5. Ixhaswe ngamaxabiso okhuphiswano, ukuxhaswa kwabathengi okubalaseleyo, kunye netekhnoloji yokuphumeza ephezulu, i-Eightcap ibonelela ngorhwebo kubathengi kunye nabathengi beziko kwi-Forex, ii-Indices, iiRhwebo, kunye neMarike yentengiso.
Ulwazi oluqulethwe kule imeyile luyimfihlo kunye nokusetyenziswa kwesihlomelo kuphela. Ukuba ufumene le imeyile ngempazamo, nceda usazise kwaye uyicime kwangoko kwinkqubo yakho. Nceda uqaphele ukuba izimvo okanye izimvo ezichazwe kule imeyile ayizizo ezesibhozo. Isilumkiso sobungozi: Ukurhweba ngomda kubeka umngcipheko omkhulu, kubandakanya umngcipheko wokulahleka ngokupheleleyo kotyalo-mali lwakho lokuqala. Awunayo eyakho, okanye awunawo nawaphi na amalungelo kwiiasethi ezingaphantsi. Ukurhweba ngomda akulunganga kubo bonke abatyali mali, ke nceda uqinisekise ukuba ubazi ngokupheleleyo ubungozi obubandakanyekayo, funa ingcebiso ezizimeleyo ukuba kukho imfuneko, kwaye ufunde amaxwebhu asemthethweni afanelekileyo (afumaneka kwiwebhusayithi yethu) ngaphambi kokwenza izigqibo.
tags Umthengisi weCFD, Iimali ze-Crypto, Isibhozo
I-Bitcoin Cash ebonisa ukukhula emva kweminyaka emi-4 kwintengiso
Ukuhlaziywa: 18 Agasti 2021
I-Bitcoin Cash Kutshanje ndikwazile ukubhiyozela usuku lwayo lokuzalwa lwe-4 emva kokudalwa ngo-Agasti 1, 2017, kwaye ngelixa ibineengxaki ezininzi ekufuneka ijongane nazo ngexesha lokuphila kwayo, i-cryptocurrency ikwazile ukukhula kwinqanaba elitsha.
Iimali zedijithali ezikhulayo ngokukhawuleza ngo-XNUMX.
I-Bitcoin Cash yenziwa kulandela ingxoxo-mpikiswano enkulu eyayithumele ama-shockwaves kulo lonke uluntu lwe-cryptocurrency buyela e-2017 ngenxa yokungavisisani phakathi kwabakhi kunye nabaphembeleli beBitcoin ababephikisana malunga neyona ndlela ilungileyo nefanelekileyo abanokuthi bakwazi ngayo ukufumana ibhloko ye-blockchain ezona ndlela zilula. Kwakukho abanye abaxhasa uluvo lokuba ukukala kumatyathanga ngokunyusa ubungakanani bebhloko kuya kuba yeyona ndlela ilungileyo, eyathi emva koko yabona loo mbono ilungiswa kwiBitcoin Money.
Imicimbi sele isonjululwe
Njengoko sele kukhankanyiwe, bekukho ubunzima obuye bavela kule projekthi nangona kunjalo kungabonakala ngathi iminyaka emine incedisile ukukhupha nayiphi na ikink kunye nokunceda ukwenza i-Bitcoin Cash ivuthwe njengoko inokubakho okwangoku. Ewe, kuyo yonke le minyaka mine ibikho kwaye ibiyindlela efanelekileyo kwabaninzi, ikwazile ukufezekisa oko abadali bebezimisele ukukufeza ekuqaleni, nabasebenzisi bekwazi ukuba nenkululeko engaphezulu kwezoqoqosho xa besebenzisa ingqekembe. Oku kuhle kwaye kuyinzuzo enkulu kwabaninzi, ngakumbi abo bathanda ukusebenzisa i-cryptocurrency xa bengcakaza. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, kuye kwakho uhlobo olutsha lwe bitcoin live yekhasino ebonelele abadlali ngenketho yokuhlawula ngeemali ezibonakalayo ezinjengeBitcoin, i-Ethereum kunye neBitcoin Cash.
Amazwe axhamle kwiBitcoin Cash
Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba ayingobantu kuphela abaye bakwazi ukuxhamla kwinkululeko eyongezelelekileyo yezoqoqosho eyayiyilelwe ukuyinika ingqekembe, kunye namazwe nawo akwazi ukuthatha ithuba. I-Venezuela kunye ne-South Sudan, ezo zombini zithwaxwe yimicimbi yendlala, kunye neArgentina nganye ikwazile ukuxhamla kwinkxaso yenkqubo ye-cryptocurrency eye yaphunyezwa. Kungenxa yefayile ye- Utyikityo lweSchnorr, Kukuzalisekiswa komgangatho wethokheni obizwa ngokuba yi-SLP enika ingqalelo kumacandelo ezentlalo ebala.
Ewe, amaqela akhethekileyo amiselwe kwiindawo ezinjengekomkhulu laseVenezuela, iCaracas, kunye nezinye iindawo ezinje ngeColombia apho babekwazi ukunceda abathengisi abakwibhodi yabathengi kunye nabathengi ngelixa beqaqambisa zonke izibonelelo ezinokubanceda, ngakumbi i-cryptocurrency. xa behlala kumazwe athwaxwa kukunyuka kwamaxabiso kunye noqoqosho oluxabisekileyo. Njengoko imali ebonakalayo ikhutshiwe kuloo nto, ezi ngxaki zinokuba zezedlulileyo kubahlali ekufuneka behlupheke kwezi ngxaki rhoqo.
Yamkelwe ngabathengisi abaninzi kunye notshintshiselwano olukhulu lwe-crypto
Ukuba kuye kwakho obunye ubungqina obuye bafuneka ukuqaqambisa ukuba i-Bitcoin Cash ikhule njani ukulandela unyaka wayo wesine, kungalula ukuyifumana xa ujonga iindlela zokuhlawula ezinikezelwa kwihlabathi liphela. Ngenye yeefoloko zeBitcoin ezinenzuzo ngoku ezikhoyo kwimarike yonke ye-cryptocurrency, njengoko kungoku nje kuninzi lotshintshiselwano oluphambili olunokufunyanwa kwihlabathi liphela, kunye neBinance, Hobi, Upbit, Coinbase, Okex kunye nePayPal yonke ebonelela yona, ngelixa yamkelwe nabathengisi abaninzi kwihlabathi liphela, kananjalo.
tags BCH, I-Bitcoin Cash, Coinbase
Iindlela zokurhweba ngeBitcoin-Yonke into ekufuneka uyazi
Ukuhlaziywa: 31 Julayi 2021
I-Bitcoin yeyona cryptocurrency inkulu emhlabeni kwaye iphakathi kwezona ngqekembe zaziwa kakhulu phakathi kwabarhwebi. Kwabaninzi, iBitcoin lukhetho olukhulu lotyalo-mali. Ikhutshwe emva ngo-2009, i-Bitcoin iyaziwa ngokuvula indlela yezinye ii-altcoins kwimarike.
I-Cryptocurrency ibone utshintsho olukhulu kule minyaka idlulileyo. Ngelixa abanye behlala bengathembi malunga neBitcoin, le ngqekembe yedijithali inamaxesha amaninzi ibonakalisile ukuba inokuba lukhetho olukhulu kutyalo mali.
Kodwa, uthengisa njani ngokuthe ngqo i-Bitcoin? Kukho iindlela ezimbalwa onokutyala kuzo kwi-Bitcoin kwaye uyisebenzise ukuze ufumane inzuzo. Umzekelo, ungabhalisela kolunye lotshintshiselwano oluninzi lwe-crypto kwimarike, wenze iidipozithi kwaye uqale ukuthenga nokuthengisa ii-cryptocurrensets. Unako kwakhona urhwebo lweBitcoin CFDs, esikunikeza amandla okuthelekelela ukuhamba kwexabiso kwimarike.
Nokuba ukhetha oluphi ukhetho, uya kuhlala kufuneka ukuba wenze uphando olwaneleyo ukwenza uqikelelo oluchanekileyo kwaye uvule iiodolo ezifanelekileyo.
Enye yeendlela ezidumileyo zokuthengisa i-Bitcoin kukutshintshiselana nge-crypto. Zininzi zazo ziyafumaneka kwimarike kwaye zenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu. Zininzi iindlela zokutshintshiselana nge-crypto kwimarike, phakathi kwazo kukho iBinance, iKraken, iCoinbase, kunye nezinye ezininzi.
Ukuqala kolu tshintshiselwano akufuneki kube yingxaki. Ukwenza iakhawunti akufuneki kuthathe ngaphezulu kwemizuzu embalwa, emva koko, kuya kufuneka ulinde usuku okanye ezimbini ukuqinisekisa. Emva koko, konke okufuneka ukwenze kukufaka imali kwaye uqale ukurhweba nge-crypto.
Emva kokurhweba nokwenza inzuzo, unokurhoxisa iiBitcoins zakho kwisipaji sakho osithandayo. Zininzi izipaji zesoftware ezikunika imigangatho ephezulu yokhuseleko nokhuseleko. Kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka ukwazi ukurhoxisa imali yakho kwiifat currencies, kodwa ubukhulu becala ixhomekeke kutshintshiselwano nge-crypto oyisebenzisayo.
Eyona ndlela yokurhweba ngeBitcoin
Ukwamkela isicwangciso esiqinisekisiweyo nesiluncedo kurhwebo lweBitcoin kubaluleke kakhulu. Ngenxa yokuba imarike ingazinzanga, ukurhweba kunokuba nemvakalelo. Ngokuba nesicwangciso esithile kwangaphambili, unokuqinisekisa ukuba ulandela iingcinga zakho zokuqala kunye nezigqibo ngaphandle kokwenza izigqibo ngokweemvakalelo.
Zimbini iindlela eziphambili onokuthengisa ngazo i-crypto, enye ithengisa indawo ye-asethi ye-asethi, kwaye enye ithengisa ngayo ngomda. Indawo yokurhweba lukhetho olukhulu kwabo bakhetha ukunqanda umngcipheko omkhulu, ngokusisiseko kuthetha ukuthenga i-cryptocurrency kunye nokuyigcina ixesha elide uthanda.
Ukurhweba ngeBitcoin ngomda kudla ngokwenzeka kusetyenziswa iikhontrakthi zexesha elizayo okanye iiCFD kwaye ikunike amandla okwandisa inzuzo yakho. Kodwa, awufanelanga ukulibala ukuba ukongeza kwinzuzo, urhwebo lomda luyonyusa umngcipheko wokurhweba.
Kuxhomekeke kwindlela othengisa ngayo i-crypto, unokukhetha ngcono ukuba leliphi iqhinga lokurhweba elilingana nelakho. Umzekelo, ukuba ungumthengisi webala, kuya kufuneka uyazi ukuba elinye lawona maqhinga alungileyo onokukhetha kuwo kukurhweba ixesha elide, okanye ubambe i-cryptocurrency ixesha elide. Kwelinye icala, ukuba ukhetha ukurhweba ixesha elifutshane ngomda, kungangcono urhwebe usebenzisa iiCFD okanye ikamva.
Nangona kunjalo, khumbula ukuba ukurhweba nge-crypto ayisiyonto ilula njengoko kuthatha ixesha elininzi ukuqonda ukuba amaxabiso ahamba njani kwaye indlela yentengiso ephendula ngayo kwiintlobo ezahlukeneyo zeziganeko kwihlabathi liphela. Kodwa, kukho izinto ezinokwenza ukurhweba kube lula kuwe.
Ukurhweba nge-Bitcoin nge-bots
Kukho umda othile xa kufikwa kwidatha umntu anokuyihlalutya ngexesha elifutshane. Kwelinye icala, i-bots yokuthengisa i-crypto inokuhlalutya iziqwengana ezinkulu zedatha ngexesha elifutshane kakhulu. Zininzi iindlela zokurhweba onokuzisebenzisa ukunciphisa ixesha elichithwe uhlalutya intengiso.
Zininzi i-bots zorhwebo ezikhoyo kwimarike ezinokukunceda uthengise i-crypto ngokufanelekileyo. Enye yezo bots zokurhweba, ezaziwa ngemigangatho ephezulu yokhuseleko kunye nokhuseleko, ngaba Ibhotile yokuthengisa yeBitsgap.
I-bot yokuthengisa eyenziwe yi-Bitsgap ayikwazi ukuhlalutya kuphela idatha yeemarike kodwa iyakwazi ukuthengisa i-crypto kuwe. I-bot yokuthengisa isebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zezicwangciso kwaye inokusetyenziswa kuzo zombini i-uptrend kunye ne-downtrend, eyenza ilungele abathengisi.
I-Bitsgap crypto bot bot ingasetyenziselwa ngaphezulu kwe-25 exchange crypto kwimarike, kubandakanya nezo ezifana neBinance, Kraken, kunye nezinye ezininzi. Unokwenza isicwangciso sokurhweba ngale bot ngokucofa nje okumbalwa kwaye ungasoloko usibuyisela umva isicwangciso-qhinga sakho ngaphambi kokufaka isicelo kurhwebo lwakho lokwenyani.
Kuxhomekeka kwisicwangciso-qhinga sokurhweba osikhethileyo, unokufumana zombini inzuzo yexeshana kunye nexesha elide ngentengiso ye-crypto. Masithi uthathe isigqibo sokurhweba nge-crypto usebenzisa isicwangciso-nkqubo sokurhweba sexesha elide. Oku kuthetha ukuba uza kuthenga i-Bitcoin ngexabiso eliphantsi kwaye uyibambe ixesha elide njengoko ufuna, de linyuke ixabiso.
Njengoko ixabiso lenyukile kwaye uyakholelwa ukuba lixesha lokuba uthengise i-Bitcoin yakho, uya kuba nakho ukufumana inzuzo ngokwahluka phakathi kokuthenga kunye nokuthengisa amaxabiso.
Kwelinye icala, usebenzisa iindlela zokurhweba zexeshana elifutshane, uya kuba nakho ukwenza inzuzo ngokukhawuleza, nangona kunjalo, gcina engqondweni ukuba ezi nzuzo zisenokungabi ninzi. Kwiimeko ezininzi, abathengisi bexesha elifutshane bakhetha ukusebenzisa ubungakanani kunye nokurhweba ngomda ukwandisa inzuzo abayenzayo.
Konke kuko konke, enkosi kwitekhnoloji yale mihla, ukuthengisa ii-cryptocurrensets akufuneki kube nzima. Abarhwebi kwihlabathi liphela bayafikelela kule marike kwaye konke okufuneka ukwenze ukuze ube yinxalenye yale ntengiso kukusayina kunye nolunye lotshintshiselwano lwe-crypto kwimarike.
tags Iindaba zeBitcoin zokurhweba, BTC, BTCUSD, Cryptos
Utyalo-mali oluphezulu lwe-3 ephezulu kakhulu kwi-Bitcoin ongafanele uyityeshele
Ukuhlaziywa: 15 Juni 2021
I-Bitcoin ye-2021 yenkomo yokubaleka ilawula iintloko zeendaba. I-BTC ifumene ngaphezulu kwe-100% kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezimbini, isenza ukuba ibe yeyona nto iqhuba ngokurhweba ngoku.
Phantse veki nganye, i-Bitcoin iyazichitha iirekhodi zayo zangaphambili zexabiso, ifikelela kwizinga eliphezulu le-61,354.14. Nangona oko kuye kwabonisa ezinye zeenzuzo, abahlalutyi baqikelela ukuba iya kuba ngaphezulu kwe- $ 100,000 ngokuphela konyaka. Siyaqonda ukuba uninzi lwabantu lusenokungabinabo ubuchwephesha bokwazi ukurhweba ngokusebenzayo. Kungenxa yoko le nto siza kukubonisa ezona mali zintathu zishushu zotyalo-mali ze-2021 ongamele uzikhathalele.
1 | Umcebisi ngeengcali ze RoFX
I-RoFX yi irobhothi yokuthengisa ngokuzenzekelayo enomsebenzi wokuzifundisa owakhelweyo. Oko kuthetha ukuba i-AI yokunika amandla i-RoFX isebenza ngokuzimeleyo kwaye iyaziphucula ngokwalo ngokuhamba kwexesha. Kuya kufuneka ke ulindele ukuba ukurhweba kwakho kusebenze ngokuhamba kwexesha. Okungakumbi, i-RoFX yenzelwe wonke umntu, kwaye awudingi ukuba ngumrhwebi ophambili okanye unalo naluphi na ulwazi ngokurhweba ngealgorithmic. Konke okufuneka ukwenze kukwenza idiphozithi yakho kwaye uvumele iRoFX ikwenzele urhwebo. Akukho ntengiso yencwadi efunekayo kwicala lakho; hlala phantsi ulinde inzuzo yakho.
Ukuba uyathandabuza kwaye ucinga ukuba i-RoFX ivakala ilunge kakhulu ukuba ingayinyani, i-RoFX ikunika iingxelo zorhwebo zemihla ngemihla. Oku akunikezeli kuphela ekuhleni malunga nembuyekezo yakho yemihla ngemihla ikwenza ukuba uthelekise imbuyekezo oyifumana kwiRoFX nabanye abathengisi bemoto. Ngokwembali, i-RoFX ifumene inzuzo yemihla ngemihla ye-0.38%, eguqulela ngaphezulu kwembuyekezo yenyanga eyi-11%. Lo ngumdlalo omangalisayo xa ucinga ukuba iRoFX inabasebenzisi abangaphezu kwe-70,000. Nangona i-RoFX igcina i-100% yomsebenzisi ukungaziwa, iingxelo zorhwebo ziyaqinisekiswa.
Ukufezekisa imbuyekezo engakholelekiyo, i-RoFX isete ingxowa mali ebekiweyo ekhusela wena kwimbuyekezo embi. Oku kubizwa ngokuba 'kukugubungela ilahleko.' Okungakumbi, urhwebo sisixhobo simahla esinciphisa ukwehla kweemarike ezinokuguquguquka okukhulu. Qaphela ukuba awunyanzelekanga ukuba ukhuphele okanye ufake nasiphi na isoftware kwikhompyuter yakho kuba i-RoFX ilawulwa ngaphakathi kweeseva zenkampani.
I-RoFX ineephakeji ezintathu ezahlukeneyo apho unokufumana khona imali engenayo kunye ne-BTC. Babandakanya i-Advanced Compound, Basic, kunye no-Lock Lock package.
I-RoFX Azikho iiphakheji zokutshixa: Le phakheji kuthetha ukuba ungabeka imali yakho kwiRoFX kwaye uyirhoxise nanini na unqwenela. Ngaphantsi kwale phakheji, kukho iindidi ezintlanu: Uvavanyo, ukuQalisa ngokulula, iMoneyMaker, iGolide, kunye neVIP. Zahlulwe ngesabelo sakho senzuzo yemihla ngemihla kunye nentlawulo yokusebenza. Uya kudinga ubuncinci be-0.05 BTC yokutyala imali kwiRoFX No Lock Package.
Iiphakheji ezisisiseko zeRoFX: Le phakheji inexesha lokutshixa, oko kuthetha ukuba wakube uyifakile i-BTC yakho, unokurhoxa emva kwexesha elithile. Kwinguqulelo yesilingo, ixesha lokutshixa ziintsuku ezingama-30 zokurhweba kunye nama-70 okuQala ngokuQala. Kwindidi yeMoneyMaker, yeGolide, kunye neVIP, unokukhetha ngesandla ixesha lokutshixa phakathi kweentsuku ezingama-70 ukuya kwezingama-360 zokurhweba.
Iiphakheji zeRoFX eziPhambili zeKhompawundi: Kwiiphakheji ezintathu zeRoFX, le inembuyekezo ephezulu kuba inzuzo ihlanganiswe ngokungagqibekanga ngaphandle kokuhlaziya ixesha lokuthengisa. Nangona ineefizi zentsebenzo ezisezantsi, kuya kufuneka ukhethe ixesha lokutshixa kuzo zonke iindidi ezintlanu ezisusela kwiintsuku ezingama-70 ukuya kwezingama-360 zokurhweba.
Oku kuthenga nje kwaye kubambe iiBitcoins zakho ixesha elide. Le yeyona ndlela indala, elula, kwaye ethe ngqo yokutyala imali kwiBitcoin. Nangona kunjalo, esi sicwangciso sifuna umonde kunye nokukwazi ukungaphazanyiswa kukungazinzi kweemarike rhoqo okujikeleze ixabiso le-BTC.
Inzuzo ephambili yesi sicwangciso kukuba ungumnini we-BTC; ngokungafaniyo nokuthengisa kunye ne-BTC CFDs, akukho sibonelelo sichaphazelekayo. Ngenxa yoko, ekuphela kwento ojamelene nayo kukuba ixabiso leBitcoin lehla laya kwi-0 yeedola kwaye ipotifoliyo yakho icinyiwe. Kodwa akukho mathuba okuba kwenzeke oku. Umntu unokuphikisana ngokuchaseneyo-kwixesha elide, i-BTC ikulungele kuphela ukuya phezulu. Abanye abahlalutyi bayibeka kwi- $ 100,000 ukuphela kwe-2021.
Masithathe umzekelo ukuba uthengile kunye ne-HODLed BTC ngoJanuwari 2020, iphothifoliyo yakho yayiya kuxabisa malunga ne-590%.
Kumntu oqale i-HODLing ngoJanuwari 2019, imbuyekezo ye-BTC ingaphezulu kwe-1,200%.
3 | Isongelwe iBitcoin
Ubukhulu becala, iqonga le-DeFi alihambelani ne-BTC kuba yakhiwe kwiqonga le-Ethereum, kwaye uninzi lwezicelo ze-DeFi ziqhutywa kwi-Ethereum blockchain. Kodwa akufanele ukhathazeke. Usebenzisa i-Bitcoin esongelweyo, usenza utyalo-mali lweBitcoin kwiDeFi.
Nge-Bitcoin esongelweyo, ungafaka i-BTC yakho kwizivumelwano ezifanelekileyo, ezinokuthi emva koko zisetyenziswe kwindalo ye-DeFi. Ngokusisiseko, iithokheni ezisongelweyo ze-Bitcoins mint ezihambelana ne-ERC-20 kwaye zikhonkxwe kwixabiso le-BTC. Oku kudala amathuba angenamda kutyalo-mali lweBitcoin njengokuma kwesitokhwe, ukubonelela ngamachibi okuhlawula amatyala, kunye ne-HODLing yezahlulo ezihlawula izabelo.
Siyathemba ukuba uza kulifumana eli nqaku linomdla kwaye linolwazi. Kwimeko apho kukho nayiphi na imibuzo, nceda usazise kwizimvo ezingezantsi.
Konke okugqibelele. Masinwabe!
tags Utyalomali lweBitro, Utyalomali olushushu lwe-bitcoin, I-RoFX
Ngaba iBitcoin yiKamva?
Ukuhlaziywa: 17 Novemba 2020
Nangona sele kudlule iminyaka elishumi ukusukela oko i-Bitcoin yabakho, uninzi lwabantu namhlanje alunazi ncam malunga nokusebenza kwayo. Umbuzo ophambili obuzwa ngabantu yile: Yintoni i-cryptocurrency? Kwaye nangona impendulo inokuba nzima, ngamagama alula, i-cryptocurrency yinto yexabiso ledijithali enokusetyenziswa njengendawo yotshintshiselwano ngexesha lokuthengiselana nge-cryptographic.
I-Cryptography inceda ukudala imali eyongezelelweyo kunye nolawulo lwentengiselwano, kwaye ngaphandle komdla ngokubanzi kwisifundo, ababaninzi abantu abazi iinkcukacha. Ii-cryptocurrensets zineendlela ezininzi ezisetyenziswayo namhlanje kumashishini awahlukeneyo, kwaye eyona nto iphambili kweli qela yiGaming. Uhlobo olungachazwanga ngokwenyani lwentengiselwano ye-cryptographic yintsikelelo yokungcakaza kwi-Intanethi. Ndwendwela Casino Bee kuluhlu olupheleleyo blockchain yekhasino kufutshane nawe.
Isebenza njani i-Cryptocurrency?
I-Cryptocurrency isebenzisa umatshini obizwa ngokuba yi-blockchain apho i-cryptography isebenza njengotshintshiselwano. Intengiselwano irekhodwa kwileja yedijithali ebizwa ngokuba yiblokchain. Inkqubo yokulandelela le ntengiselwano ibizwa ngokuba yimigodi. Imali iqulethe yona kwaye ayifuni ababoneleli benkampani yesithathu njengeebhanki zokugcina nokucwangcisa ukuthengiselana.
I-Bitcoin yeyona cryptocurrency yaziwayo namhlanje, kwaye iyafana neengqekembe zomzimba, inokusetyenziselwa ukurhweba ngeempahla kunye neenkonzo. Olu rhwebo luchasene nobuqhetseba, nangona ugqithiselo olwenziwe nje lungeke lwenzeke. Yiyo loo nto abasebenzisi bacetyiswa ukuba basebenzise isilumkiso xa besenza imicimbi yokushicilela. Kwicala eliqaqambileyo, intengiselwano ye-BTC phantse ayinakwenzeka ukuba ilawulwe.
Liyintoni ikamva ledijithali yemali?
I-Bitcoin kunye ne-cryptocurrensets ezifanayo zibonakalise ukuba zitshintsha kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye utshintsho olwenzeka rhoqo ikakhulu lubangelwa yimimiselo yezemali yase-US. Nangona oku kungamangalisi okoko i-BTC yazalwa ngexesha lobunzima bezezimali e-US, ikamva layo alinxibelelananga ne-United States kuphela!
Ngokophando oluzimeleyo, iBitcoin kusenokwenzeka ukuba ifike kumanqaku angama-500,000, 2030 ngo-XNUMX, ngelixa ukuthandwa kwayo kulindeleke ukuba kuqhume, kuthathelwa ingqalelo uhlobo lwentengiselwano. Xa isizukulwana sanamhlanje sithatha inzala esebenzayo kwiitransekshini zexabiso eliphakamileyo ze-BTC, ikamva lijongeka ngathi liyathembisa. Nangona kunjalo, ukumbiwa kwemigodi akuyi kuba yinzuzo njengakwiminyaka yokuqala kuba akusayi kubakho ndlala yabavukuzi.
Metallic Bitcoin uphawu ngaphezulu kwetshathi yezemali. Ukwenziwa ngokuthe tyaba kugxilwe ekukhetheni kunye nekopi yendawo.
ZiQinisekiswa njani iiNtengiselwano?
I-cryptocurrensets ine-network yoontanga, nganye egcina iinkcukacha zayo yonke imicimbi yangaphambili. Lonke ugqithiso ngaphakathi kwenethiwekhi ligunyazisiwe sisitshixo sangasese somthumeli, emva koko umyalezo usasazwa ngenethiwekhi koontanga. Intengiselwano igqityiwe emva kwexesha elithile kwaye, yakuba igqityiwe, ayinakubuyiselwa umva.
Umsebenzi wasemgodini unoxanduva lokugcina iirekhodi. Iinkqubo zemigodi zaziswa ngayo yonke intengiselwano ngaphakathi kwenethiwekhi, kwaye banomsebenzi wokuyistampisha kwaye bayithumele kwakhona kwinkqubo. Nje ukuba kugqityiwe, zonke i-node zongeza intengiselwano kwi-blockchain apho kugcinwa khona iirekhodi zohambo olude.
tags Bitcoin, block Chain, BTC, BTCUSD
IFransi 40 (i-FR40EUR) ikummandla weOverold, ngoMeyi ungaQhubeka phezulu
Ukuhlaziywa: 28 October 2020
Iindawo eziKhuselekileyo: 5900, 6000, 6100
Imimandla yenkxaso ephambili5400, 5300, 5200
IFransi 40 (i-FR40EUR) yexesha elide: Ukuthwala
IFransi 40 isalathiso sokuhla. Isalathiso siwile kwaye siphule uluhlu lwamaxabiso angaphambili. Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa ulwandiso lwe-Fibonacci engama-38.2% ngo-Okthobha 12. Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kufikelela kwinqanaba 2.618Fibonacci. Isalathiso eso siya kuwela kwinqanaba lama-3959.20.
Ishadi lemihla ngemihla le-FR40EUR
Kungoku nje ikwinqanaba lama-29 le-Index ye-Relative Strength period 14. Kukwindawo ye-downtrend kwaye kungaphantsi kwe-centerline engama-50. Isalathiso siwele kwingingqi ethengiswe ngaphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye ezantsi zibonisa imeko esecaleni.
IFransi 40 (FR40EUR) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Nge-22 ka-Okthobha ezantsi; ikhandlela elibuyiswe ngokutsha lavavanya ulwandiso lwe-Fibonacci engama-38.2% Oku kubonisa ukuba isalathiso siya kufinyelela kwinqanaba le-2.618Fibonacci. Leyo yimarike iya kufikelela kwinqanaba le-4435.0.
I-FR40EUR-Itshathi yeeyure ezi-4
Isalathiso okwangoku singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwemihla ngemihla. Kukwimeko ye-bearish. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu.
Imbonakalo Jikelele ye-Itali France 40 (FR40EUR)
IFransi 40 isehla. Uxinzelelo lokuthengisa kunokwenzeka ukuba luqhubeke kodwa isalathiso sifikelele kummandla ogqithileyo. Abathengi kulindeleke ukuba bavele ukutyhalela amaxabiso phezulu.
tags EFR40EUR, France 40, Uhlalutyo Technical